I-Recipe Yokugaya Elula - Ungadliwa
ukosi othosiwe othosiwe othosiwe emoyeni
ungenza ikhofi le-dalgona nge-blender
uyini umehluko phakathi kwe-marinara ne-pasta sauce
I-Recipe Yokugaya Elula
Lokhu I-Recipe Yokugaya Elula izoqedela cishe noma yikuphi ukudla! Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi, nebhotela ziphonswa ngamacube wesinkwa omisiwe, bese zifakwa umhluzi bese zibhakwa kuze kube kushisa negolide.
Ungangizwa kabi ngiyakuthanda amazambane abondiwe , kepha ngizohlala njalo ngigcina indawo yokufaka okwenziwe ngokwamazambane. Ngingadla ukugxilisa ukudla ngakunye!
Ungayenza kanjani iTurkey Stuffing
Ukugxusha kungenye yezitsha ezibaluleke kakhulu eholidini noma ekusakazeni kwe-Thanksgiving. Sikhonze eceleni ubhontshisi oluhlaza casserole , amazambane abilayo , turkey, turkey gravy (kunjalo), futhi ungakhohlwa mayelana uphaya wethanga okwe-dessert!
Ezinye izindlela zokupheka zifaka izinto ezinjengezaqathe, omisiwe noma ama-cranberries omisiwe. Ngenkathi konke lokhu kungaba izengezo ezinhle, akukho okuqhathaniswa nale iresiphi yokugxila yakudala!
Izinkukhu Isinongo iyinhlanganisela yezinongo engcono kakhulu yale recipe yokufaka izinto ye-turkey (futhi kwesinye isikhathi ingathengiswa ngesikhathi se-Thanksgiving)! Uma ungakaze usebenzise isinkukhu sezinkukhu, kuyinhlanganisela emnandi yezinongo ezifana ne-sage, thyme ne-rosemary futhi ingeza ukunambitheka okumnandi kumasobho, isitshulu nama-casseroles. Ungasebenzisa futhi izinongo zakho (noma wenze Isinkukhu Sokuzenzela ), Ngicabanga ukuthi i-sage yisinongo esivame kakhulu ekugxileni.
Ungakwenza Kanjani Ukugxusha
Icebo lokufaka izinto ezinhle zakudala kusuka ekuqaleni liqinisekisa ukuthi isinkwa sakho somile impela ngaphambi kokufaka umhluzi. Uma uthenga isinkwa sakho ezinsukwini ezimbalwa kusenesikhathi, sidabule noma usisike sibe izingcezu bese usomisa esitsheni izinsuku ezimbalwa etafuleni lakho. Noma yiluphi uhlobo lwesinkwa oluzokwenza, ngivame ukusebenzisa i-combo yombala onsundu nomhlophe.
Empintsheni, ngithanda ukunamathisela ama-cubes esinkwa esisha kuhhavini ku-300 ° F ukuwomisa cishe imizuzu eyi-10 (qiniseka ukuthi awusoze uwufake brown / toast)! Uma womisa isinkwa esisha kuhhavini, ngeke udinge umhluzi omningi.
Ngikhetha ukupheka izinto zami endishini ye-casserole (okungayenza igqoke) noma ukuyenza Ukugxotshwa Kwembiza . Ukupheka i-turkey nokugxila ngokuhlukile kuqinisekisa ukuthi bobabili bafinyelela emazingeni okushisa afanele ngaphandle kokupheka ngokweqile.
Ukugxusha kungenziwa ngaphambi kwesikhathi futhi kugcinwe efrijini esitsheni se-casserole. Uma ufaka i-turkey, ukugxusha kufanele kube ukushisa kwamakamelo noma kupholile futhi kungafakwa ku-turkey kuze kube ngaphambi nje kokuwosa.
Uma wenza izinto zakho ze-turkey, khumbula ukupholisa ngokuphelele ukugxusha kuqala. Uma ungakwenzi lokho, inyoni izohlala endaweni yokushisa engaphephile isikhathi eside. Uma ufaka i-turkey, isikhungo sokugxila kufanele siphekwe sibe ngu-165 ° F ngoba ukuqhuma okuvela kule nyoni kufaka ukungena.
Ukugxusha uhlangothi oluhle njengoba kungenziwa kalula ngaphambi kwesikhathi! Mane ulungiselele njengoba uqondisiwe, vala uvalwe futhi ufake efrijini amahora angafika kuma-48.
Ukubhaka, yisuse efrijini okungenani imizuzu engama-30 ngaphambi kokubhaka. Lungisa njengoba uqondisiwe (kungadingeka ukuthi ungeze imizuzu embalwa uma kusabanda kusuka esiqandisini).
Ungakubamba Kanjani Ukuqhwa
Wonke umuntu uthanda izinsalela ze-turkey dinner. Izitaki zokudla kwaseTurkey noma ama-sandwich ashisayo ayizindlela zami engizithandayo zokuzijabulela, kepha kwesinye isikhathi awukwazi ukufika kuzo ngesikhathi zizokonakala. Ungesabi, njengoba ukugxusha kwe-turkey kumisa kahle! Vele uyifake efrijini futhi kufanele ihlale izinyanga ezimbalwa.
Ukuphinda uvuselele ukugxusha, kufake kuhhavini ku-350 ° F cishe imizuzu engama-20 ngomhluzi omncane kuyo ukuze kungapheli.
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Sokupheka55 imizuzu Isikhathi Esiphelele1 ihora 10 imizuzu Izinkonzo12 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Le iresiphi yokugxila yakudala izogcwalisa cishe noma isiphi isidlo! Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi, nebhotela ziphonswa ngamacube wesinkwa omisiwe, bese zifakwa umhluzi bese zibhakwa kuze kube kushisa negolide. Phrinta Phina
▢ezimbili anyanisi omncane kuqoshiwe
▢4 izingongolo isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kuqoshiwe
▢⅔ inkomishi ibhotela
▢1 ½ amathisipuni izinkukhu isithokelo noma ½ isipuni sage yomhlabathi
▢12 izinkomishi ama-cubes wesinkwa
▢3-4 izinkomishi umhluzi wenkukhu
▢ezimbili wezipuni iparsley entsha
▢1 isipuni amakhambi amasha ohlakaniphile, thyme, rosemary
Hlanganisa ibhotela esikhwameni esikhulu phezu komlilo ophakathi. Faka u-anyanisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kanye nezinongo zezinkukhu (kanye ne-rosemary uma usebenzisa). Pheka ngaphezulu kokuphakathi kuze kube yithenda (ungabi nsundu), cishe imizuzu eyi-10-12.
Faka ama-cubes wesinkwa esitsheni esikhulu. Faka ingxube ka-anyanisi, iparsley namakhambi amasha.
Thela umhluzi ngaphezulu kuze kube yilapho ama-cubes enomswakama (kodwa hhayi okweqile) bese uphonsa ngobumnene. Ungahle ungawudingi wonke umhluzi. Isizini ngosawoti kanye nopelepele ukunambitha.
Faka ingxube esitsheni sokuphaka, ichashazi elinebhotela elengeziwe nesembozo.
Bhaka imizuzu engama-35, uvule bese ubhaka imizuzu eyishumi eyengeziwe.
Uma usebenzisa i-rosemary kumakhambi, pheka kanye no-anyanisi / isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Ukuze ufake i-turkey, ukugxusha kufanele kupholile ngokuphelele esiqandisini okungenani imizuzu engama-45. Ukwenza Phambili: Lungisa njengokuyalelwa, vala uvalwe futhi ufake efrijini amahora angafika kuma-48. Ukubhaka, susa efrijini okungenani imizuzu engama-30 ngaphambi kokubhaka. Lungisa njengoba uqondisiwe (kungadingeka ukuthi ungeze imizuzu embalwa uma kusabanda efrijini).
Amakholori:185,Amakhabhohayidrethi:16g,Amaprotheni:3g,Amafutha:ishumi nanyeg,Amafutha agcwalisiwe:6g,Cholesterol:27mg,I-Sodium:462mg,Potassium:175mg,Umucu:1g,Ushukela:ezimbilig,Uvithamini A:435IU,Uvithamini C:6.8mg,I-calcium:61mg,Insimbi:1.4mg
Igama elingukhiyeiresiphi yokugxusha i-turkey InkamboIsidlo sakusihlwa KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
REPIN le Recipe Yokuqothula Okukhulu